Faah-faahin ku saabsan duqeyn iyo dagaal ka dhacay G/Bari | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin ku saabsan duqeyn iyo dagaal ka dhacay G/Bari
Faah-faahin ku saabsan duqeyn iyo dagaal ka dhacay G/Bari
Bari (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin cusub ka soo baxaya dagaal iyo duqeyn subixii Talaadada maanta ah ka dhacay deegaanno ka tirsan Gobolka Bari.
Dagaalkaas ayaa waxa uu u dhaxeeyay Ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan Ururka Daacish.
Ciidanka Puntland ayaa weeraray deegaanka Ceelka il oo hoostagga tuulada Timirshe ee Degmada Iskushuban Gobolka Bari, halkaasi oo dagaalyahannada Daacish ay ku sugnaayeen.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in dagaalka uu bar-bar socday duqeyn xoog leh oo lagu garaacay goobaha gabaadka ay ka dhiganayeen xubnaha ka tirsan Daacish ee weerarka lagu qaaday.
Saraakiisha Ciidamada Puntland wali ma aysan bixin faah faahin ku aadan weerarka ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen Xubnahan Daacish ka tirsan.
Lama oga sidoo kale ilaa iyo hadda inta uu la eeg yahay Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkaasi Ciidamada Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadka Daacish.
Ururka Daacish ayaa saldhigyo kala duwan waxa ay ku leeyihiin deegaanno badan oo ka tirsan Gobolka Bari, halkaasi oo ay ka soo qorsheeyaan weerarada ay ku qaadaan Goobaha Ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin.
Cabdi Xaashi oo sharci darro ku tilmaamay ansixinta hay’ado aan soo marin Aqalka sare
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Shir muhiim ah isugu yeeray Madaxda dowlad goboleedyada
RW Abiy oo shaaca ka qaaday in Ciidamada Eritrea iyo Sudan laga saarayo Itoobiya